ကလေးနှင့် ချင်းတောင်ဒေသ၌ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ကျဆင်းနေမှုကြောင့် သဲကျောက် အရောင်းအဝယ် ပါး? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေး၊ တမူးဒေသနှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကျဆင်းနေမှုကြောင့် ကလေးဝမြို့ ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်းမှ သဲနု၊ ကျောက်စရစ်ထုတ်လုပ် ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ အရောင်းအဝယ်ပါးလျက်ရှိကြောင်း ကလေးဝမြို့ ချင်းတွင်းဆိပ်ကမ်းထဲ ကျောက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ ဦးတင်အောင်က မေ ၃ဝ ရက်ကပြောသည်။
”ကျွန်မတို့ သဲနဲ့ကျောက်စရစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုတာက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ များပြားကောင်းမွန်မှ အရောင်းအဝယ်သွက်တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကတော့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း တွေလည်း ရောင်းရတယ်။ ပြီးတော့ တမူးနယ်စပ်ကလည်း ရသလောက် ဝယ်နေတာဆိုတော့ ဈေးကောင်းလည်းရတယ်။ အရောင်းအဝယ်လည်းသွက်တယ်။ အထူးသဖြင့် ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့ ဆောင်းနဲ့နွေမှာ အရောင်းသွက်ပါတယ်။ အခုနှစ်ကတော့ နှစ်တိုင်းထက် အရောင်း အဝယ်အပါးဆုံးလို့ပြောရမှာပါ”ဟု ကလေးဝမြို့ နှင်းသီရိ သဲနှင့် ကျောက်စရစ်ရောင်းဝယ်ရေးက ပြောသည်။
ယခုရက်ပိုင်း ချင်းတွင်းသဲနှင့် ကျောက်စရစ်ထုတ်လုပ်ရေးကို ကလေးဝမြို့အထက်ပိုင်း သုံးမိုင်ဝန်းကျင်ဝေးသော ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတွင် သက်ဆိုင်ရာက ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုထားပြီး၊ ကလေးဝမြို့သို့ စက်လှေဖြင့် သယ်ဆောင်ရောင်းချကြောင်း၊ ယခုနှစ်တွင် သဲကျောက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ ၁ဝ ဦးဝန်းကျင်သာရှိပြီး အရောင်းအဝယ်ပါးသည့်အတွက် အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နေသူ ငါးဦးဝန်းကျင်သာရှိသည်။ မိုးဝင်ရာသီ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအချို့ ပိတ်သိမ်းချိန် ကလေးဝဆိပ်ကမ်းတွင် ကျောက်စရစ်တစ်ကျင်းလျှင်ကျပ် ၃၅ဝဝဝ ဝန်းကျင်ဈေးရှိပြီး၊ သဲတစ်ကျင်းလျှင် ကျပ် ၂ဝဝဝဝ ဝန်းကျင်ဈေးရှိ ကြောင်းသိရသည်။
ATM ကတ်ဖြင့် မတူညီသော ဘဏ်မှ ငွေထုတ် ယူပါက ငွေကျပ် တစ်သိန်းကို ၀န်ဆောင်ခ ၂၀၀ကျပ် အစား ၅၀၀ ကျပ် အ??
ပြည့်တန်ဆာ မိန်းကလေးများ၏်ဘဝကို ပုံဖော် ရိုက်ကူးထားသော ‘ရွှေကြာ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရုံတင??